Soosaarka shiinaha bisadaha Shiinaha Warshad iyo Warshad | Bondhot
Shiinaha wuxuu soosaaraa qashinka bisadaha tofu ee la dhaqi karo
Waxyaabaha ugu muhiimsan Tofu cusub ama fiber-ka dhirta
Qalabka Qalabka digir kafee ah, shaah cagaaran, miro guduud ah, kaarboon firfircoon
Cabir Dherer: 10-30mm dhexroor: 3.0mm
Heerka boorka <5%
Xirxirida Gudaha 6L ama 7L iyo 18L
Faahfaahinta soo dejinta 1 Iyada oo santuuqa
2 Iyadoo aan lahayn santuuqyo
MOQ 9Ton ama 12Ton
Midab Cagaar ama loo habeeyay
Summad Waxaan ku guuleysan karnaa OEM
Faa'iidada Qashinka Bisadda Tofu
Lagu sameeyay dhammaan Tofu dabiiciga ah iyada oo aan kiimiko lahayn
Xakamaynta urta cajiibka ah
Aad iyo aad ugu jilicsan bisadaha bisadaha
99% Boor Bilaash ah
Si fudud loo qaado
Isku-xoqid dhakhso leh
La dhaqi karo oo si fudud loo tuuri karo
Qashinka bisadaha Tofu waa nooc cusub oo qashin bisad ah. Waxay ka qaadeysaa dhibaatada iyo saameynta deegaanka ee waxyeelada leh daryeelka kitty! Qashinka bisadaha tofu waxaa gebi ahaanba laga sameeyay dhirta dib loo warshadeeyay, waxayna qabataa 2-3x si ka fiican dhoobada ama qashinka madadaalada ee nuugista iyo urinta urta.
Caafimaad iyo badbaado leh. Xakamaynta iyo urinta aan caadiga ahayn. Kuwani waa wax yar oo ka mid ah guulaha cajiibka ah ee uu Keeni karo Qashin-Qubka Pro Tofu. Sababtoo ah qaaciidooyinkayagu kuma jiraan waxyaabo lagu daro synthetic, kiimikooyin, dhoobo ama wixii udgoon ama cadar dheeri ah, waad nasan kartaa si fudud adoo og in bisadaada aan sinaba loo waxyeeleyn doonin!
Faa'iidooyinka ay bisadaha iyo dadkuba isla markiiba arki karaan oo dareemi karaan
Foomamka lagu sameeyo tofu-dabiiciyeedka iyo 99% alaab-noole aan-ba-boor lahayn, waxaad waayo-aragnimo u leedahay guud ahaan faa iidooyin badan adoo ogaanaya in adiga iyo bisaddaadu aysan saameyn ku yeelan doonin dhibaatooyinka neefsashada iyo wixii qashin ah ee bisad ah oo si fudud loo daadin karo!
Boorka siigada, xoqida, iyo biyo dhaqida. Waxaa laga sameeyay 100% maaddooyinka dabiiciga ah oo dhan, TofuKitty gebi ahaanba waa mid aan lahayn boodh, kuuskuus ilbidhiqsiyo ah, wuxuu nuugaa qoyaanka 3x oo ka wanaagsan dhoobada iyo 2x wuxuu ka fiican yahay qashin-qubka, waana 100% la dhaqi karo. Ma jiro wax raad raac ah iyo boodh toona. Biyo raac oo samee!
Tilmaame 3-tallaabo ah si aad u cusbooneysiiso sanduuqa qashinka ee bisaddaada
Tallaabada 1: Ku buuxi saxaarad qashin ah oo nadiif ah hal ilaa laba inji (2 - 5 cm) oo ah Quudiye Pro Tofu Bisad
Tallaabada 2:Ka saar burooyinka oo si masuuliyad leh u tuur. Xusuusnow in Tarbinta Bisadaha loo yaqaan 'Nurture Pro Tofu Cat Litter' ay tahay mid baaba'aysa oo lagu daadin karo tiro yar
Tallaabada 3: Kudar inbadan oo ah Tarbiyada Bisadaha Tofu si aad u cusbooneysiiso sanduuqaaga qashinka kadib markasta oo qashinka la saaro.
Waxaa lagula taliyay in la ilaaliyo ugu yaraan laba inji (5 cm) oo qashin ah marwalba.
Faaruqi qashinka qashinka ah ee bisadda cusub bishiiba mar.
Hore: Qashinka bisadaha dabiiciga ah